Hello Nepal News » पिएसजीविरुद्धको खेलअघि ग्वार्डिओलाले प्रेमिल मुडमा यसरी सम्झिए मेस्सीलाई
पिएसजीविरुद्धको खेलअघि ग्वार्डिओलाले प्रेमिल मुडमा यसरी सम्झिए मेस्सीलाई
एजेन्सी, वैशाख १५
स्पेनिस फुटबल क्लब बार्सिलोनाका कप्तान लिओनल मेस्सीको सम्झौता यो सिजनको अन्त्यसँगै सकिँदैछ । यदि क्लब र उनीबीच अब बाँकी आठ हप्ताका बीचमा नयाँ सम्झौता नभए मेस्सी आगामी समर सिजनमा आफूले चाहेको क्लबमा जान स्वतन्त्र हुनेछन् । यो सिजनको पूर्वसन्ध्यामै क्लब छाड्ने निर्णय गरेका मेस्सीले बार्सिलोना छाड्न सक्ने ढोका अहिले पनि खुला नै छ । तर, क्लबको नयाँ अध्यक्षमा उनीसँग सुमधुर सम्बन्ध रहेका जोन लापोर्टा आएकाले मेस्सीले क्लब नछाड्ने र नयाँ सम्झौता गरेर बार्सिलोनामै रहने सम्भावना बढेको धेरैको बुझाइ छ ।
गत समरबाटै मेस्सीको नाम इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर सिटी र फ्रेन्च क्लब पिएसजीसँग नजिकबाट जोडिँदै आएको छ । धेरैको बुझाइ र अड्कलबाजी यो छ कि, मेस्सी सिटी जान चाहन्छन् । किनभने, त्यहाँ बार्सिलोनामा लामो समय एकदमै नजिक भएर काम गरेका प्रशिक्षक पेप ग्वार्डिओला प्रशिक्षक छन् । बार्सिलोनामा लामो समय सँगै काम गरेका यी दुईलाई पुनः एकै क्लबमा काम गरेको हेर्न चाहने अहिले पनि धेरै छन् । मेस्सी ३४ वर्षका हुन लागे पनि अझै यो सम्भावनालाई धेरैले नजिक देखिरहेका छन् । के मेस्सी साँच्चै बार्सिलोना छाड्न गइरहेका छन् त ? छाडेको अवस्थामा उनी सिटी नै जान्छन् ? वा, अन्यत्र कतै ?
मेस्सीको भविष्यबारे उनै ग्वार्डिओलाले सांकेतिक रूपमा खास खुलासा गरिदिएका छन् । च्याम्पियन्स लिग फुटबलको सेमिफाइनलमा फ्रेन्च क्लब पिएसजीसँगको खेलअघि आयोजित प्रेस कन्फेरेन्समा कुरा गर्दै उनले खास सन्देश दिएका छन्, जसबाट यो सिजनपछि मेस्सीको भविष्य के हुनेवाला छ भनेर सजिलै बुझ्न सकिन्छ । ग्वार्डिओलाका अनुसार बार्सिलोनाको नयाँ अध्यक्षमा लापोर्टा आएसँगै मेस्सीका लागि अनुकूल वातावरण बन्दै गइरहेको छ । र, लापोर्टा पुनः मेस्सीकै वरिपरि रहेर पुरानो बार्सिलोनाको चमक फर्काउन भव्य खेल योजना ल्याउने तयारीमा छन् ।
‘लियोको बारेमा मानिसले धेरैखाले कुरा गरे । ती कति सत्य थिए, कति झुठा, मलाई थाहा छैन । तर, हामी त सधैं संवादमै थियौं । किनभने, हामीबीच कुनै दूरी छैन । आज पनि हामी कुरा गर्छौं । फुटबल, घरपरिवार र जीवनका बारेमा कुरा गर्छौं । उनी लामो समयदेखि बार्सिलोनामा छन् । आजसम्म पनि उनी त्यहीं छन्, यो देख्दा म ज्यादै खुसी छु । किनभने, उनी त्यहाँ हुनु सबैभन्दा राम्रो कुरा हो । उनी बार्सिलोनामा हुनु र बार्सिलोनासँग मेस्सी हुनु फुटबलको एक सुन्दर कुरा हो,’ ग्वार्डिओलाले भनेका छन् ।
मेस्सीको आगामी भविष्यलाई संकेत गर्दै ग्वार्डिओलाले भनेका छन्, ‘मैले धेरैपटक यो कुरा भन्दै आएको छु– लियो बार्सिलोनामै रहून् । यो मजस्ता धेरैको चाहना हो । अस्तिसम्म उनी त्यहाँबाट बाहिर हुन चान्थे । तर, उनी अब बिस्तारै त्यहाँ खुसी हुन थालेका छन् । उनी बार्सिलोनासँग फेरि रमाउन थालेका छन् । यसको अर्थ तपाईं पक्कै बुझ्नुहुन्छ होला । म लियोलाई धेरै राम्रोसँग बुझ्छु । उनी अझै बार्सिलोनाका लागि धेरै खेल्न र धेरै जित्न चाहन्छन् । उनी अझै त्यहाँ राम्रो समय ल्याउन चाहन्छन् । र, यसको सुरुआत भइसकेको छ ।’
नयाँ अध्यक्ष लापोर्टाले बार्सिलोनामा पुनर्जागरण ल्याउने कुरा ग्वार्डिओलाले बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘लापोर्टा नयाँ अध्यक्षमा आउनु राम्रो कुरा हो । मलाई लाग्छ, उनी पुरानो बार्सिलोनालाई दुरुस्तै बनाएर फर्काउन चाहन्छन् । उनले आगामी दिनका लागि राम्रा योजनाहरू ल्याउनेवाला छन् । त्यहाँ अब जागरणको समय हुनेछ । तर, यी सबै कुरा मेस्सीकै वरिपरि रहेर हुनेछ । मेरो विचारमा अहिले नै बार्सिलोना मेस्सबिनै अघि बढ्नका लागि तयार भएको छैन । मेस्सीले कस्तो निर्णय लिन्छन् भन्नेमा बार्सिलोनालाई शंका छ । तर, उनीहरूले एकअर्कालाई धेरै राम्रोसँग बुझेका छन् ।’
ग्वार्डिओलाले बार्सिलोनामा मेस्सीसँग बिताएको रमाइलो समय आफूले सधैं याद गर्ने गरेको बताएका छन् । मेस्सीसँग मैदानबाहिर, प्रशिक्षण सेन्टर वा ड्रेसिङ रुम सबैतिर आफू हरेक समय संवादमै रहने गरेको ग्वार्डिअ‍ोलाले बताए । ‘जतिबेला हामी एकसाथ थियौं, हामी मैदानबाहिर मात्रै नभएर ट्रेनिङ सेन्टरदेखि ड्रेसिङ रुममा पनि सधैं संवादमै हुन्थ्यौं । हामी त्यहाँ हरेक दिन कसरी अझै राम्रो गर्ने भनेर कुरा गर्थ्यौं । यदि एकै सिजनमा तीनभन्दा बढी प्रतियोगिता हुन्थे भने हामीसँग ती सबै जित्ने सक्ने ऊर्जा र एकता हुन्थ्यो,’ ग्वार्डिओलाले विगत सम्झिँदै भने, ‘त्यहाँका हरेक कुरा म जहाँ पुगे पनि याद गर्छु । किनभने, बार्सिलोना र त्यहाँका खेलाडी मेरा लागि विशेष छन् ।’
ग्वार्डिओलाले आज बार्सिलोनामा त्यहाँको जुनियर टिमबाट सिनियर टोलीमा आएका युवा खेलाडीलाई मेस्सीले प्रेरणा दिएर संस्कार पूरा गरिरहेको भन्दै ताफि गरे । ‘मेस्सी आफैं पनि ला एकेडेमीबाट आएका खेलाडी हुन् । त्यसैले आज उनले एकेडेमीबाट आएका थुप्रै खेलाडीलाई प्रेरणा दिइरहेका छन्, त्यहाँको संस्कार सिकाइरहेका छन् । मलाई विश्वास छ, मेस्सीको करिअर अन्त्यतिर पुग्दै उर्दा त्यहाँ उनको छत्रछायाँमा थुप्रै प्रतिभावान् युवा खेलाडी तयार हुनेछन् । ती युवा खेलाडी भाग्यमानी छन्, जसले आफू बच्चा छँदा चमत्कारिक मेस्सीलाई देखे र आज उनीसँगै सहकर्मी बनेर खेलिरहेका छन्,’ ग्वाडिओलाले भने ।
प्रकाशित मिति १५ बैशाख २०७८, बुधबार १४:०६